नमूना स्वास्थ्य गाउँ भनेको के हो ?
गुणस्तरीय जीवनयापन सहित ग्रामीण समुदायका स्वास्थ्य सम्बन्धी समग्र सुचकहरुमा सुधार ल्याउनका लागि नेपाल सरकारद्वारा आ.व. ०६८/६९ बाट संचालनमा ल्याएको कार्यक्रम नै नमुना स्वास्थ्य गाउँ कार्यक्रम हो । विभिन्न अन्तरक्षेत्रगत सूचकहरु र मूलत : स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख सुधारद्वारा ' गाउँ ’ लाई नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा रुपान्तरण गर्नु नै यसको मूल अभिष्ट हो । स्थानीयस्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति आम प्रतिवद्धता र सुदृढ अन्तर क्षेत्रगत समन्वयद्वारा संचालन गरिने यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले अनुदानका रुपमा एउटा गा.वि.स लाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराई नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा विकास गर्नका लागि लगानी गर्ने गर्दछ । हाल नेपालका विभिन्न २० वटा जिल्लाका २० वटा गा.वि.सहरु नमुना स्वस्थ गाउँका रुपमा विकास गर्न छनौट भएका छन् ।
2 “म्याराथन टक शो” सम्पन्न
3 Career News and Info चैत्र २०, २०७३
5 Climate Change Development Portal के हो ?
6 जनसंख्या व्यवस्थापन भनेको के हो ?
7 Career News and Info चैत्र ४, २०७३
8 मौलिक अधिकार/मानव अधिकारमा के फरक छ ?
9 Public Service Card भनेको के हो ?
10 कार्बन व्यापार भनेको के हो ?